UEmily Brontë. Imibongo emithathu yothando kwiminyaka yakhe engama-200 | Uncwadi lwangoku
Umzobo kaEmily Brontë ngumntakwabo uPatrick Bramwell Brontë. Umbhalo obhaliweyo wemibongo kaGondal.
Namhlanje, nge-30 kaJulayi, sibhiyozela umhla wokuzalwa omtsha Emily Brontë, umbhali wenoveli oliNgesi kunye nembongi, ongomnye we Eyona migca idumileyo kunye neqaqambileyo yoncwadi oonobumba beSaxon. Umbhiyozo okhethekileyo kuba banjalo 200 iminyaka. Iya kukhunjulwa ngonaphakade njenge Umbhali we olo ludala loncwadi lothando lwaseVictorian oluthi iwuthering Heights, inoveli yakhe kuphela. Kodwa kuyafuneka ukugxininisa inkangeleko yakhe yemibongo engaziwayo, okanye egutyungelweyo, ngenxa yobukhulu bakhe njengombhali wenoveli. Ke ngoko, ndiyabahlangula aba Tres Imibongo yothando yakho ukudumisa imemori yakho kwakhona.
1.2 Yiza uhambe nam
1.4 Ingcwaba lentokazi yam
1.5 Xa kufuneka ndilale
Uzalelwe uJulayi 30, 1818 en Thornton, Yorkshire, ecaleni koodade wabo Charlotte (UJane Eyre) kunye Anne (Agnes Ngwevu), Esinye sezalathiso eziphambili zoncwadi lothando lwaseVictorian. Ubukho bakhe, njengabo boodadewabo, babonakaliswa ngu ubunzima bobuntwana, un isimilo sokungenisa, Ukuphulukana nomama kwangaphambi kwexesha kunye nodadewabo abadala, austerity Utata ongumfundisi waseTshetshi kunye nobomi obunengxaki yomntakwabo omncinci Isebe. Ndaphila nje 30 iminyaka kwaye ndishiya i lincinci kodwa lingenakulinganiswa ilifa loncwadi kumgangatho wayo kunye nefuthe elilandelayo.
Ngentsholongwane ezalwe kwihlabathi elicingelwayo elibizwa ngokuba nguGondal, awabelana ngalo nodadewabo u-Anne, imibongo yothando nguEmily Brontë baxuba imvakalelo ephuphumayo kunye nomxholo imibongo yothando uninzi lweempawu eziza kuthi kamva zibe sisiseko kwi imibongo eyiphumeleleyo.
Kwakhona ityala kunye namandla abalinganiswa kunye neendinyana zayo izandulela Kwinto eza kuba kamva kukuhamba kwakhe ukuya kwinoveli kunye iwuthering Heights. Ngokukodwa, abalinganiswa bakaHeatcliff, uCatherine Earnshow okanye uEdgar Linton sele babonwa kwezinye. Kodwa ngaphambi kokuba loo mibongo ibe ipapashwe ngokudibeneyo ngoodade abathathu abaphantsi Amabinzana obudoda. Kwaye nangona bengaphumelelanga, bayityala imbewu.
Ezi zintathu zazo zisayinwe nguEmily.
Yiza uhambe nam
kuphela usikelele umphefumlo ongafiyo.
Sasihlala sibuthanda ubusuku obumnandi
Ukuzula kwikhephu ngaphandle kwamangqina.
Ngaba siza kubuyela kwezo ziyolo zindala?
Amafu amnyama akhawuleza
Kwiminyaka emininzi eyadlulayo,
ndide ndife esantini
kwiibhloko ezinkulu ezibekiweyo;
njengokuba ukukhanya kwenyanga kuqhubeka
njengobuso obuncumo, uncumo lwasebusuku.
Yiza uhambe nam;
kodwa ukufa kubile inkampani yethu
(Njengokusa kubebi umbethe)
Nganye nganye wawathatha la mathuba
kwada kwasala ababini kuphela;
kodwa iimvakalelo zam zisadanyaza
ngokuba kuwe zihlala zihleli.
Musa ukufuna ubukho bam
Ngaba uthando lomntu lunokuba yinyani?
Ngaba intyatyambo yobuhlobo inokufa kuqala
kwaye uvuselele emva kweminyaka emininzi?
Hayi, nangona behlambe iinyembezi,
Iziduli zingcwaba isiqu salo,
Ubomi bobomi buphelile
kwaye okuluhlaza akusayi kubuya.
Ukhuselekile kunokoyikiswa kokugqibela
ayinakuphepheka njengamagumbi angaphantsi komhlaba
apho abafileyo behlala khona nezizathu zabo,
Ixesha, elingenasiphelo, lahlula zonke iintliziyo.
Ingcwaba lentokazi yam
Intaka ihlala ngakusasa,
I-lark ilandelela umoya ngokuthula,
Inyosi iyaxhentsa phakathi kweentsimbi ze heather
Ukuba bayayifihla iNenekazi lam elihle.
Ixhama lasendle esifubeni sakhe libandayo,
Iintaka zasendle ziphakamisa amaphiko azo ashushu;
Kwaye uyamomotheka kuye wonke umntu ngokungakhathali,
Ndacinga ukuba xa udonga olumnyama lwengcwaba lakhe
Igcinwe ibuthathaka kunye nobufazi,
Akukho mntu uya kuvusa ulonwabo olusikayo
Ukukhanya okungapheliyo kovuyo.
Babecinga ukuba iliza losizi liza kudlula
Ukushiya umkhondo kwiminyaka ezayo;
Kodwa ziphi zonke iintlungu ngoku?
Kwaye ziphi iinyembezi?
Bayilwele imbeko yokuphefumla;
Okanye kulonwabo olumnyama nolomeleleyo,
Umhlali welizwe lokufa
Iyaguquguquka kwaye ayinamdla nayo.
Kwaye ukuba amehlo akho ajonge kwaye ukhale
De umthombo wentlungu uphele
Akayi kubuya ekufeni kwakhe enoxolo;
Kwaye ayiyi kubuyisa ukuncwina kwethu elilize.
Ukuvuthuza, umoya wasentshona, phezu kwenduli engazaliyo:
Ukumbombozela, imilambo yehlobo!
Akukho sidingo sezinye izandi
Ukugcina inenekazi lam ekuphumleni kwalo.
Xa kufuneka ndilale
Owu, ngelixa apho kufuneka ndilale,
Ndiya kuyenza ngaphandle kokuzazisa,
Kwaye andizukukhathalela ukuba imvula inetha kanjani kwakhona
Okanye ukuba ikhephu ligquma iinyawo zam.
Izulu alithembisi ngeminqweno yasendle
Zingazaliseka, mhlawumbi isiqingatha.
Isihogo kunye nosongelo lwaso,
Ngamalahle alo angacimekiyo
Asoze angenise lomyolelo.
Ke ngoko ndiyatsho, ndiphinda into enye,
Okwangoku, ndide ndife, ndiza kuthi:
Oothixo abathathu ngaphakathi kwesakhelo esincinci
Benza imfazwe imini nobusuku.
Izulu aliyi kubagcina bonke, nangona
Kwaye baya kuba ngabam kude kulityalwe
Oo, xa ixesha lifuna isifuba sam ukuphupha,
Zonke iimfazwe ziya kuphela!
Kuba umhla uya kufika xa ndimele ndiphumle,
Kwaye oku kubandezeleka akusayi kuphinda kundingcungcuthekise.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UEmily Brontë. Imibongo emithathu yothando kwiminyaka engama-200
uKarla andreine sitsho
Phendula u-karla andreine
Umbethe weDew sitsho
Ndiyabuthanda ubugcisa ngeendlela zayo ezahlukeneyo kuba ndiqinisekile ukuba bawuthwele umphefumlo wombhali wayo.
Phendula uRocío Cadena